Rapper လို့ဆိုပေမယ့် သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပါ ဆရာကျတဲ့ Idol များ
On May 10, 2018 June 4, 2018 By shwe yi
Idol Rapper နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော Idol Rapper တွေဖြစ်ကြတဲ့ 2PM ရဲ့ Leader ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Jay Park နဲ့ Block B Leader Zico တို့ကတော့ လုံးဝချန်ထားလို့မရတဲ့ Idol နှစ်ဉီးပါလေနော့်။ သူတို့နှစ်ဉီးလိုပဲ အဖွဲ့ထဲမှာ Rap Position ကိုယူထားပေမယ့် သီချင်းဆိုလိုက်ပြန်တော့လည်း မထင်ထားလောက်အောင်ကိုကောင်းနေတဲ့ Idol များစွာရှိနေပါသေးတယ်။
ကဲ.. ဘယ် Idol တွေဖြစ်မလဲ~
Jay Park ( Former 2PM)
Jay Park ကတော့ Rapper & Singer လို့ဆိုတာထက် Artist ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပိုပြီးလိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ‘Asia Got Talent 2017’ မှာလည်း Judge အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Korea ရဲ့ အကြီးမားဆုံး Rap ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ‘Show Me the Money’ Season 4,5,6 တို့မှာလည်း Judge အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Jay Park က Music Composer လည်းဖြစ်တဲ့အြပင် သူရဲ့သီချင်းတော်တော်များများကို ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။2PM မှာ Rapper Position ကိုယူထားပေမယ့် သီချင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီး သီဆိုနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ SMTM6Final Round 1 မှာ Judge competition မှာ သီဆိုခဲ့တဲ့ “Birthday” ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာဆိုရင် Rap ကိုသာမက vocal ပိုင်းကိုပါ ပိုင်နိုင်လွန်းလှတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Zico ကိုတော့အားလုံး က Rapper တစ်ယောက်ရယ်လို့ပဲ သိထားကြတာပါ။ Zico ရဲ့ Hit song လို့ပြောရင်တော့ ‘Boys And Girls’ (Feat. Babylon) ကတော့ညွန်ပြစရာအလွယ်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Zico လည်းပဲ ‘Show Me the Money’ Season 4,6တို့မှာ Judge အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Zico ရဲ့ Vocal Skill ကို ‘I Am You, You Are Me’ မှာ တစ်ချက်ရှိုးကြည့်လိုက်ကြပါဉီး ။
G Dragon ( Big Bang )
Big Bang ရဲ့ Leader, Fashion Icon ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ G- Dragon ကတော့ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်လို့ပြောရလောက်အောင် အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံလွန်းသူကြီးပါ။ Big Bang ရဲ့ သီချင်းအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး သီချင်းတိုင်းကလည်း Hit Song တွေချည်းပဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် Leader ကြီးရဲ့ Vocal Skill ကတော့ မေးစရာကိုမလိုတာပါ၊ Solo အနေနဲ့ရော Big Bang အနေနဲ့ပါ ၁၀ နှစ်တာအောင်မြင်မှုကို ထိန်းထားနိုင်နေတာလည်း နဲနဲနော Skill မဟုတ်ဖူးလေနော့်။ GD ရဲ့ သီချင်းများစွာထဲကမှ ‘WHO YOU?’ မှာ တော့ GD ရဲ့ Vocal Skill ကို အထင်းသားတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
Exo ရဲ့ Rapper ဖြစ်ပေမယ့် EXO ရဲ့သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်တဲ့ Chanyeol က သီချင်းကိုလည်း ပိုင်နိုင်စွာဆိုတတ်သေးတယ်ဆိုတာ သိပါသလား? Exo ရဲ main Vocal ဖြစ်တဲ့ Chen နဲ့အတူ ‘Suger Man’ မှာသီဆိုထားတဲ့ ‘If You Love Again’, JYP ရဲ့ ‘Party People’ မှာ မထင်မှတ်ပဲ သီဆိုခဲ့တဲ့ ‘Creep’ သီချင်း နဲ့ John Legend ရဲ့ ‘All of Me’ ကို Cover ပြန်ဆိုခဲ့တာတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘာလာလာ ပိုင်နိုင်နေတဲ့ Chanyeol ရဲ့ Skill တွေကို အထင်းသားတွေ့မြင်ရမှာပါနော်။ စန္တယားလေးတီးပြီး သီဆိုထားတဲ့ ‘All of Me”ကို ကြည့်မိရင်တော့ သေချာပါတယ် တစ်ခါတည်းကြွေဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
Hyolyn (Former SISTAR)
Hyolyn ကိုတော့ ဆွဲဆောင်မှုအြပည့်ရှိပြီး အသံချိုချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ သီချင်းဆိုကောင်းလွန်းသူရယ်လို့ သိထားကြပေမယ့် ‘Unpretty Rapstar 2’ မှာ ပါဝင်လာတော့ အားလုံးက အံသြခဲ့ကြရပြီး သူမရဲ့ Rap တွေက အသိအမှတ်မပြုပဲ မနေနိုင်အောင်ကို ကောင်းလွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ ‘Unpretty Rapstar 2’ ရဲ့ Grand Final မှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ‘My Love’ သီချင်းမှာဆိုရင် သူမရဲ့ ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့ Vocal ရယ်၊ အပိုအလိုမရှိတဲ့ Rap တွေရယ်နဲ့ အားလုံးကို အံ့သြအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Black Pink ရဲ့ Main Rapper ဖြစ်တဲ့အပြင် Leader လဲဖြစ်တဲ့ Jennie ကလည်း Rapper ပေမယ့် သီချင်ဆိုလိုက်ပြန်တော့လည်း Main Vocal လားလို့ ထင်ရလောက်အောင် သီချင်းကောင်းမွန်စွာသီဆိုနိုင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။ YG Audition မှာ Wale ရဲ့ ‘Flower Bomb’ မှာဆိုရင် သူမရဲ့ Vocal ကို အထင်းသား တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ပြီးတော့ Feat အနေနဲ့ သီဆိုပေးခဲ့တဲ့ GD ရဲ့ ‘Black’ သီချင်းမှာဆိုရင်လည်း Jennie ရဲ့ Vocal ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ သူမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ Rap တွေကိုသာ သီဆိုတတ်တဲ့သူမက ထူးခြားတဲ့ Vocal ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
ဒီလိုထူးခြားတဲ့ Talent တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Idol တွေမှ အများကြီးပါ။ ဒါလေးကတော့ မင်မင်သိသမျှ ထူးခြားတဲ့ Rap Skill နဲ့ Vocal Skill တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Idol တစ်ချို့ပါလေနော်။ ကဲ.. စွယ်စုံရနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Bais လေးတွေပါခဲ့ရင် ဂုဏ်ဆာသွားကြပါဉီး။ ?
PREVIOUS POST Previous post: Titanic theme နဲ့ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ Adele
NEXT POST Next post: Justin Bieber တကယ်ရင့်ကျက်လာနေပြီလား??